Ogaden News Agency (ONA) – Waa Barnaamijkii Abaabulka iyo Diyaarinta Bulshada Halgameysa Qeybtii 3AAD- Rabiyoow Guul iyo Xornimo?? By: Xaaji M/rashiid.
Waa Barnaamijkii Abaabulka iyo Diyaarinta Bulshada Halgameysa Qeybtii 3AAD- Rabiyoow Guul iyo Xornimo?? By: Xaaji M/rashiid.
Mahad oo dhan Allaah baa leh, Nabad iyo Naxariisna ha ahaato Rasuulka dushiisa SCW. intaa kadib waxaan halgamayaal la socotaan inuu wali guumayste haysto Dalkii Ogadenya ee qaaliga ahaa. Sidaas oy tahay majiro sharci ka shaqeeya oon ka ahayn midka askarta guumaystuhu gacanta ku wadato ee waagii baryaba lasoo baxaya tabo guumaysi oon horay loo arag. Guumaystuhu isagoo og inuu daalim yahay hadana kama xishoonayo inuu soo taagnaado, sidaa awgeed haduu xaq udirirku gaabiyo ama ka xishoodo inuu guumaystaha la dagaalamo wuu qaldanyahay.
Waxaan wali kujiraa BARNAAMIJKII ABAABULKA IYO DIYAARINTA BULSHADA oo Danta aan kaleeyahay tahay in Halgamaagu Indhaha furo isla markaana fiiro gaar ah uyeesho isbadalada caalamaka ka dhacaya ee umad waliba doonayso inay go’aankeeda hanato. Hadaan hoos ugu sii dego dhuuxa uu Barnaamijkani xambaarsanyahay waa mid kamid ah isbadalada Aduunka ka dhacay. Intiina lasocotay barnaamijyadii hore waxaan kaga hadlay isbadalkii ka dhacay Afrika iyo wadamada Yurubta bari qaarkood. Maantana waxaad ila wadaageysaan isbadalkii waynaa ee kadhacay wadankii horay loo odhan jiray Yugoslavia.
KU TUSAALE QAADO HALGAMOW ISBADALKA KA DHACAY DALKII AHAAN JIRAY YUGOSLAVIA
The Seven States of the Former Yugoslavia:/Todobada waddan ee horay u ahaa Yugoslavia-
Slovenia, Macedonia, Croatia, Serbia, Montenegro, Kosovo, and Bosnia-
Waxaa jirtay in wadamada aan soo xusay la isku odhan jirayYugoslavia ama Balkans oo uu madaxwayne ka ahaa Macangagii Slobadan Milosevic oo kasoo jeeday Qowmiyadda sida Tigreega u naxariista daran ee Serbia. Ninkaasi wuxuu u awood sheegtay qaar kamid ah qowmiyadihii kale, wuxuuna u geystay xasuuq baahsan oon waxba la dhaafin. Wax kalaba iska daaye car yaa sheegay ama arkay Milosevic oo qoslaya! Wadanka Yugoslavia wuxuu ka koobnaa Dalal kala haysta diimo kala duwan sida Catholic, christian, Orthodox iyo Islam, taasina waxay keentay in la is xamili waayay oo wadankii noqday Tusbax furtay oo qolo waliba dawlad ku dhawaaqday waa sida Itoobiya kusoo socotee.
Qolyo kale oo ka xoog badan ayaa isagiina lagu saliday iyagoo ku eedeeyay inuu xasuuqay Dadwayne lagu sheegay ilaa 8000 oo Ruux iyo waxay mood iyo noolba lahaayeen. In muddo ah ayay meelaha wadwadeen sidii Neef saylad loo wado, kadibna way xabiseen sidaas ayuuna ku naf waayay Doqonkii isagoo aad u bahdilan. Hadaad u fiirsatay akhristow waxaa si aad ah isu shabaha xaga naxriis,darrada qowmiyadda Tigreega iyo Serbiyaanka, waxaa kale oo iyaguna isu ekaa xagga dhaqan xumada Meles Zanawi iyo Slodaban Milosevic. Waxaa layaab leh in Dawladihii talaabada ka qaaday dambiilahaas ay maanta iyagu taageero la daba joogaan Taliska woyaanaha ee habeen iyo maalimba dhiigga faraha kula jira. Waa duni dhaqankeedu noqday lajiifiyaana banaan! si kastaba ha ahaatee waxaa hubaal ah in dulmi waliba leeyahay maalin uu soo afjarmayo oo uuna dhaafi karin.
Waxaa muhiim inay umadda ree ogadenya ku baraarugto in dadyowgan xoroobay ayna lahaan jirin Jabhado hawdka galay oo barafka kusoo dhex jabhadeeyay sanooyin badan. Taa badalkeeda waxay ahaayeen keeb la yuruur, waxayna ka faa’iideysteen fursaddii ugu horreysay ee soo martay oo ahayd burburka dawladii dhexe. Waxaa muuqata inay lahaayeen aqoonyahano ku dagaalamayay Qalinka iyo Siyaasadda oo gaadayay jaaniska soo baxa kana dhabeeya.
Wadanka Ogadenya ayaa nasiib u helay Ciidan gobanimo,doon ah kii ugu ilbaxsanaa oo ay yartahay in la arkay isagoo kale Qarnigii tagay, markaan sidaa leeyahay waxaan ka eegayaa xagga daacadnimada, adkeysiga waqtiga dheer, ballan oofinta, joogtaynta halganka, isku tashiga iyo talo saarashada Eebewayne. Guud ahaan wadamadii ka xoroobay Midowgii Soviet iyoYugoslavia oo isku darkoodu yahay 20 Dal waxaa ka halgan culus Ururka ONLF ee sidaa ula socda.
Hadaan isku soo xaabiyo Nuxurka qoraalka waxaa la joogaa saban uu Ururwaynaha ONLF ku dhowyahay inuu gaadho guushii kama dambeysta aheyd isagoo dhanka kale hogaanka uhaya Qowmiyadaha kale ee doonaya inay ka hoos guuraan Taliska Itoobiya ee Dad cunka ah!!
Lasoco Barnaamika Qeybta 4aad haduu Rabi idno